Ungayifumana njani okanye uyisule ifowuni yakho elahlekileyo kaGoogle kunye neapos; indawo entsha yeakhawunti yam
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uyifumana njani okanye uyosula ifowuni yakho elahlekileyo kaGoogle ngeGoogle & apos; indawo entsha yeAkhawunti yam
Uyifumana njani okanye uyosula ifowuni yakho elahlekileyo kaGoogle ngeGoogle & apos; indawo entsha yeAkhawunti yam
Isizathu sokuba bangabi baninzi abantu abasebenzisa 'fumana ifowuni yam' okanye 'bafumane imisebenzi yabahlobo bam enikezelwa yi-Android kunye ne-iOS, kukuba bangcwatywe kakhulu, kunye nomsebenzi wokumisela. Izolo, uGoogle uzamile ukusombulula ubuncinci inxenye yokuqala yengxaki, kwaye ngale ndlela-sizakuzama ukusombulula ezinye.
Izolo, uGoogle ubhengeze ukuba kunjalo Ukuhambisa ukhetho 'Fumana ifowuni yam' ukusuka kwimfihlo yayo emnyama kwaye inzulu nakubani na ngaphandle kweekhowudi zayo ezibekwe kwiimenyu zesisu zenguqulo yeVenkile yokuDlala yewebhu. Ewe, ezo & iiapos zichanekile kanye apho uMlawuli weSixhobo se-Android kunye nomfumani wefowuni babekhona, kodwa akusekho.
UGoogle wakhupha umphathi wesixhobo esincinci ukuze abone ingca eluhlaza kunye nesibhakabhaka esiluhlaza, wayibeka kwindawo efanelekileyo ngakumbi, kodwa engacacanga kwindawo ephakathi yomsebenzisi myaccount.google.com. Ngenxa yokuba inomdla wokwenza iapp kuyo yonke into, kwaye ngamanye amaxesha ezimbini okanye ezintathu zazo zokwenza imisebenzi efanayo, mhlawumbi ezo zilungile kwaye zilungile, nangona kunjalo. Nazi iiapos zendlela yokuseta isoftware yakho ekufumaneni indawo entsha:
1. Yiya e myaccount.google.com , kwaye ungene ngeakhawunti oyisebenzisayo kwifowuni yakho ye-Android, ukuba awukenzi njalo. Ngenye indlela, kwifowuni yakho ungatsho ngokulula & ldquo; Kulungile Google, ndibonise iakhawunti yam kaGoogle & rdquo; Ukukhangela ngelizwi, kwaye uGoogle uya kukuthatha apho, okanye uchwetheze kwibhokisi yokukhangela. Kwixesha elizayo, uya kuba nakho ukufaka ngokulula kwigama lakho ukufikelela kwiAkhawunti yam;
2. Uya kubona icandelo lokuFumana iFowuni yam, cofa kwikhonkco elithi 'Qalisa';
3. Khetha izixhobo ze-Android ozifunayo, kwaye uqhubeke noseto olufunayo lokufumana, ukuthumela umyalezo wokufumana, ukuwukhalisa, okanye ukusula ukucoceka, ukuba konke okunye kusilele. Ngaphandle kokuthetha, kuya kufuneka uvumele ukulandelwa kwendawo kwifowuni ngokwayo. Yiyo yonke loo nto & apos; konke kuko.
Uyifumana njani ifowuni yakho elahlekileyo kaGoogle kunye nesixhobo esitsha seAkhawunti yam kuGoogle
imidlalo efana super mario run
ezona meko ze-iphone 5 zihlala ixesha elide
I-T-Mobile's FamilyWhere ibonelela ngeenkonzo zokulandela amalungu osapho
Uyivula njani i-bootloader kwiifowuni ze-Motorola (Moto X, Moto G)
IOS 14 'Ukhuseleko lweNtloko' ityhila ukuba iApple ayisakhathalelanga ukhetho lwabathengi
Abo basebenza ekhaya banokugcina imali besebenzisa i-Boost Mobile & apos; $ 10 / $ 15 yezicwangciso zenyanga
Ababhalisi beVerizon ngoku bangasasaza imidlalo yasekhaya kunye nexesha eliphambili ngaphandle kokusebenzisa idatha yabo
Intengiso yeTV ye-Samsung Galaxy Note 8 imalunga nobudlelwane obusekwe kwi-phablet
Abathengi be-AT & T ngoku banokucwangcisa ukuqeshwa kwi-Intanethi kutyelelo lwevenkile